In Ka Badan 120 Ruux Oo Ku Dhimatay Qarax Ka Dhacay Wadanka Pakistaan – Radio Daljir
Juunyo 25, 2017 9:04 b 0
Saraakiil ayaa sheegay in ugu yaraan 123 qof ay dhinteen ka dib markii booyad shidaal siday ku qaraxday meel u dhaw magaalada bariga Pakistan ku taal ee Ahmedpur.
Dad ayaa ku soo ururay meesha ay booyaddu ku qallibantay oo doonayey in ay dhurtaan shidaalka, ka dibna waxa dab qabsaday booyaddii sidaas ayayna dad badani ku dhinteen. Tobanaan kale ayaa isbitaallaada lagu dawaynayaa.
Dad sigaar cabayey oo goobta joogay ayaa loo malaynayaa in ay sababeen dabka qabsaday shidaalkii daatay iyo booyaddaba, sidaa waxa ku waramay TV-ga Geo ee Pakistan laga leeyahay isagoo soo xiganaya dad goob joog ahaa.
Wadooyinka dalkaas ayaa lagu yaqaan in ay khatar badanyihiin, baabuurta oo aan si fiican loo daryeelin iyo wadeyaal si bilaa taxadar ah u kexeeya baabuurta ayaa loo aaneeyaa shilalka ka dhaca dalkaas.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidanka ayaa goobta loo diray si ay dadka dhaawaca ah isbitaallada ula gaadhaan, sidaana waxa sheegay af-hayeenka ciidanka Maj-Gen Asif Ghafoor.
Wararkii Ugu Dambeeyey ee Sida Looga Ciidey Caalamka Islaamka (dhegayso)